नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com): प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुँदा धेरैले निकै ठूलो आशा गरेका थिए बाबुराम भट्टराईबाट, तर बाबुराम बदनाम हुँदै.. !!!...
प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुँदा धेरैले निकै ठूलो आशा गरेका थिए बाबुराम भट्टराईबाट, तर बाबुराम बदनाम हुँदै.. !!!...
- सरोजराज अधिकारी
भदौ ११ मा प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुँदा धेरैले निकै ठूलो आशा गरेका थिए बाबुराम भट्टराईबाट । तर यतिखेर अधिकांशले भन्न थालेका छन्, जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको ! प्रधानमन्त्री भट्टराईको कार्यक्षमतामाथि हालै, चैत पहिलो साता भएका केही घटनाले पनि प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएका छन् । उनले न सुशासन दिन सकेका छन्, न त आफ्नै मन्त्रीहरूले गरिरहेको अराजक शैली रोक्न सकेका छन्, कारबाही त परकै कुरा भयो । आइतबार मात्रै मदिराले मातेका स्वास्थ्य राज्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले वीर अस्पतालका कर्मचारीमाथि दुव्र्यवहार गरे । त्यसै दिन मन्त्रीको दुव्र्यवहार तथा कर्मचारी युनियनको दादागिरी रोक्न नसकेको भन्दै सचिवहरूले सामूहिक राजीनामाको चेतावनी दिए । सिँचाइमन्त्री महेन्द्रप्रसाद यादव र उनका निजी सचिवले महिला सचिव बिन्द्रा हाडालाई अपशब्द प्रयोग गर्दै चैत १ गते गरेको दुव्र्यवहार, शिक्षा र महालेखापरीक्षकको कार्यालयका सचिवमाथि युनियनमा आबद्ध कर्मचारीहरूको अभद्र व्यवहारबाट स्थायी सरकार अर्थात् कर्मचारीतन्त्र आजित भएको थियो । त्यसैले आइतबार बिहान बसेको सचिवहरूको बैठकले यस्ता गतिविधि नरोकिए सामूहिक राजीनामा दिने चेतावनी दिएको हो । 'कहीं नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा' भनेजस्तो त भूमिसुधार मन्त्रालयमा भएको छ । मन्त्री भीमप्रसाद गौतम र राज्यमन्त्री ज्वाला साह दुवै माओवादीका हुन्, त्यसमाथि दुवै बाबुराम समूहकै । तर साहले गौतमद्वारा 'व्यापक भ्रष्टाचार भएको' सार्वजनिक दाबी गरेकी छन् । गत साताको अर्को चर्चित घटना रह्यो, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका पुत्र प्रकाशसहितको
टोलीलाई सगरमाथा आरोहणका लागि २ करोड रुपैयाँ दिने सरकारी निर्णय । चौतर्फी विरोधपछि टोलीले आइतबार रकम नलिने घोषणा त गरेको छ तर सरकारले उक्त निर्णय फिर्ता लिएको छैन । यसै सेरोफेरोमा प्रधानमन्त्रीपुत्री मानुषी यमी क्रिकेट संघ 'क्यान' को सदस्य मनोनीत भएको खबर बाहिर आयो । यो मनोनयन आफ्ना पितासँग जोडिएपछि मानुषीले बेलैमा सदस्यमा नबस्ने घोषणा गरेर भट्टराईको बदनामीलाई मत्थर पार्ने कोसिस गरिन् ।
विगतमा जस्तै अहिले पनि अनलाइनहरूमा राखिने बाबुरामबारे समाचार सर्वाधिक 'क्लिक' हुने र प्रतिक्रिया जनाइनेमध्ये पर्छन् । फरक यति हो, हिजो गुणगानमा लेखिने प्रतिक्रियाहरू अहिले गालीगलौजमा रूपान्तरित हुन थालेका छ् । फेसबुक, ट्वीटरजस्ता सामाजिक सञ्जालमा पनि उनीविरुद्ध आक्रोश पोख्ने क्रम ह्वात्तै बढेको छ ।
इतिहासकै ठूलो मन्त्रिपरिषद् बनाएको मितिबाटै बाबुरामको चर्को आलोचना सुरु भएको हो । एक साताअघि मात्रै मन्त्रीको संख्या ४६ सदस्य पुर्‍याउँदा खेपेको चर्को आलोचना बिर्संदै प्रधानमन्त्री भट्टराईले कात्तिक २७ गते मन्त्रिपरिषद् पुन: बिस्तार गरे र मन्त्रीको संख्या ४९ पुर्‍याए । त्यसको भोलिपल्ट कतिपय मन्त्रीलाई आफैंले नचिन्ने हलुका अभिव्यक्ति दिए ।
यसबीच सरकारबाट राष्ट्रियता, मानव अधिकार र लोकतन्त्रको प्रतिकूल हुने थुप्रै निर्णय भए, जसले प्रतिपक्षीमात्र होइन, सिंगो नागरिक समाजलाई उद्वेलित गर्ने काम गर्‍यो । मन्त्रिपरिषद्को फागुन १५ को बैठकले गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा संलग्न ३ सय ६७ को मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गर्‍यो, जसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । जन्मका आधारमा नागरिकता पाएकाका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने गृहमन्त्री विजय गच्छदारको पुस २४ को निर्णय उत्तिकै विवादास्पद बन्यो । यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न नमानेकै कारण केही जिल्लाका प्रजिअको सरुवा गरियो । अन्तत: सर्वोच्चको आदेशपछि यो कार्य रोकिएको छ ।
अन्तिम कसी: शान्ति प्रक्रिया
शान्ति र संविधान, त्यसमा पनि कम्तीमा शान्ति प्रक्रिया उनकै नेतृत्वमा टुंगिएर संविधान निर्माणको ढोका खुल्न सकेको अवस्थामा भट्टराईका धेरै गल्ती समय बित्दै जाँदा बिर्सिइनेछन् । अन्यथा सरकारको दिनगन्ती सुरु भइसकेको अवस्थामा अबको केही समयपछि बाबुराम एक असफल प्रधानमन्त्रीका रूपमा सिंहदरबारबाट बाहिरिने निश्चितप्राय: छ ।
चैत ५ : स्वास्थ्य राज्यमन्त्री सरोजकुमार
यादवद्वारा रक्सीले मातेर अस्पतालमा
दुव्र्यवहार । मन्त्रीको दुव्र्यवहार र युनियनको दादागिरीले आजित सचिवहरूद्वारा सामूहिक राजीनामाको चेतावनी ।
चैत ३ : पुष्पकमल दाहालपुत्र प्रकाशको
चैत १ : सिँचाइमन्त्री महेन्द्रप्रसाद यादवले गरे सचिव विन्द्रा हाडालाई दुव्र्यवहार ।
फागुन ३० : सरुवा विवादमा गृह मन्त्रालयमै कर्मचारी झडप ।
फागुन २३ : पर्यटनमन्त्री भिसै नलिई जर्मनी
फागुन १५ : गम्भीर अपराधमा संलग्न ३ सय ६७ जनाको मुद्दा फिर्ताको निर्णय ।
फागुन ९ : सञ्चारमन्त्री जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता भ्रष्टाचार मुद्दामा जेल गए ।
फागुन ७ : प्रजातन्त्र दिवसै मनाएन सरकारले
माघ १२ : 'जनसत्ता' का घरजग्गा लिखतलाई मान्यता । माघ १८ मा सर्वोच्चले रोक्यो ।
माघ ५ : पेट्रोलियम मूल्यवृद्धि । असोज २३ मा पनि बढाइएको थियो ।
पुस २४ : जन्मका आधारमा नागरिकता पाएकाका सन्तानलाई वंशजसरह नागरिकता दिने गृहमन्त्रीको निर्णय । सर्वोच्चबाट रोक ।
पुस १२ : स्वास्थ्यमन्त्री राजेन्द्र महतोसँग असहमति जनाउँदै सचिव सुधा शर्माले
पुस ५ : नेपाली सेनाका ३ हजार दरबन्दी थपी मधेसीका लागि मात्र भर्ना खोल्ने निर्णय । पछि सर्वोच्चबाट रोक । कूटनीतिक मर्यादाविपरीत पहिल्यै कुरा खोलेपछि चिनियाँ प्रधानमन्त्रीको भ्रमण रद्द ।
मंसिर १८ : नियमविपरीत सरुवा गरेपछि शिक्षा सचिव शंकर पाण्डेले दिए राजीनामा ।
कात्तिक २७ : मन्त्रीको संख्या पुग्यो ४९ । प्रधानमन्त्रीले भने- सबै मन्त्रीलाई आफंै चिन्दिनँ ।
कात्तिक २२ : सर्वस्वसहित जन्मकैद पाएका सभासद बालकृष्ण ढुंगेललाई माफी दिन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस ।
कात्तिक ४ : भारतसँग बिप्पा सम्झौता । 'जुवा खेलेको' प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति ।
असोज ९ : रक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीद्वारा तराईका २२ जिल्ला टुक्रन सक्ने अभिव्यक्ति
Posted by www.Nepalmother.com at 1:23 AM